android ဖုန်းများအတွက် Fingertouch app ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » Fingertouch
Fingertouch APK ကို
ဒီ app တစ်ခု capacitive မူလစာမျက်နှာခလုတ်ကိုသို့က Galaxy S7 / S7 Edge ပေါ်တွင်လက်ဗွေအာရုံခံလှည့် - ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ယ့် sensor button.App ဝန်ဆောင်မှုတူသောကြောင့်မထိ foreground အတွက်ပြေးခြင်းနှင့်နေရာချတဲ့ဇွဲသတိပေးချက်လည်းမရှိ အဆိုပါအကြောင်းကြားစာ bar မှာ။ သင်မြဲအကြောင်းကြားစာကိုကြိုက်ဘူးဆိုရငျ, ပဲသင်အကြောင်းကြားစာအပေါ်လက်ညှိုးကိုကိုင် - (အကြောင်းကြားစာဝှက်ထားလိမ့်မည်ဒါပေမယ့် app ကိုနေတုန်းပဲဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်) settings ကိုဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်က disable နိုင်ပါတယ်။
လက်ဗွေ authentication ကိုတောငျးဆိုခကျြကိုတွေ့ရှိသောအခါသင်တို့ကိုစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့4စက္ကန့်ရှိနိုင်အောင်ဒီ app,4စက္ကန့်ကိုယ်နှိုက်ကခေတ္တရပ်တန့်ပြီးပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ်တိုင်ပိတ်ပစ် / အဆိုပါအကြောင်းကြားစာအနေဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကို disable, ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့ဒီများအတွက် Quick Settings ထုံးစံ tile ကို (အန်းဒရွိုက်7+ အင်္ဂါရပ်) ကိုသုံးနိုင်သည်။
အန်းဒရွိုက်7+ လိုအပ်ပါသည်, ဒီ app ကိုဘက်ထရီအကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘက်ထရီမအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ App ကိုဝန်ဆောင်မှုမျက်နှာပြင် screen ကိုပိတ်နေသည့်အခါ, အရှင်လက်ဗွေသော့ဖွင့်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပါဘူး ON သည်နှင့်အလိုအလြောကျဆိုင်းငံ့မှုသာသည့်အခါတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့စနစ်ဖြင့်အသတ်ခံရတဲ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘက်ထရီချွေတာရွေးချယ်မှုများကနေ app ကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းအရာရှိတဦးကသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသော Samsung က firmware ကိုအပေါ်သာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီ app ကို Samsung SDK ကိုအပေါ်အားကိုး။
မဟုတ်ရင် App ကိုအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ, စနစ် setting တွင်အနည်းဆုံးလက်ဗွေရာမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
A: လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကိုထိတဲ့အခါဒီ app ကို HOME ခလုတ်ကိုစာနယ်ဇင်းတက်ကြွလာသည်။ ရည်ရွယ်ချက် "homescreen ကိုသွားပါ" ဒါဟာအစစ်အမှန် HOME ခလုတ်ကိုရန်အလွန်ဆင်တူပေမယ့်အတိအကျတူညီမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် Android ကို OS ကမှပေးပို့ပါသည်။
Q: ကျွန်မတုန်ခါမှုတုံ့ပြန်ချက်ကို disable နိုင်မလဲ?
A: တုန်ခါမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်နှင့်ငါ့ app ကိုအတွင်းကိုပိတ်ထားရမရနိုင်ပါ။ သငျသညျ0မှစနစ်တုန်ခါမှုပြင်းထန်မှုပြောင်းလဲနေတဲ့နေဖြင့်လုံးဝတုန်ခါမှုတုံ့ပြန်ချက်ကို disable နိုင်ပါတယ်။ > အသံစနစ်က SETTINGS နှင့်တုန်ခါမှု> တုန်ခါမှု intensive> တုန်ခါမှုတုံ့ပြန်ချက်သွားပြီးအနည်းဆုံးဖို့ slider ကိုခန့်ထား၏။ ဤခေါ်ဆိုမှု / မက်ဆေ့ခ်ျကိုတုန်ခါအကျိုးသက်ရောက်စေမထားဘူး။
ဖြေရှည်လျားထိ function ကို disable နှင့် Fingertouch setting တွင်ထိတွေ့နှောင့်နှေးတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သင်ဆဲအလုပ်နှစ်ဆထိပုတ်ပါကင်မရာအင်္ဂါရပ်များအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
Q: ပြ status bar ကနေမြဲသတိပေးချက်အိုင်ကွန်ကိုဖယ်ရှားနိုင်သလဲ
ဖြေ Long ကစာနယ်ဇင်းပုအကြောင်းကြားစာ - အကြောင်းကြားစာ settings ကိုဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်လုံးဝကို disable နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းကြားစာကိုပိတ်ထားတစ်ကြိမ်ကဆိုဘက်ထရီချွေတာရွေးချယ်မှုများကနေဒီ app ကိုဖယ်ထုတ်ရန်အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်, Android အတွက် Fingertouch app ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုသတ်နိုင်သောသတိပြုပါ။
မေး: Fingertouch ဝန်ဆောင်မှုကို run နေစဉ်တခြား apps များအတွက်လက်ဗွေ authentication ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးနိုင်သလား?
ဖြေ Fingertouch app ကိုဝန်ဆောင်မှုတက်ကြွဖြစ်တဲ့အခါ, သငျသညျလက်ဗွေ authentication ကိုမသုံးနိုငျသညျ။ သို့သော် app ကိုလက်ဗွေ authentication ကိုတောငျးဆိုခကျြကိုတွေ့ရှိ, ဒါကြောင့်သင် authenticate မှ4စက္ကန့်ရှိသောအခါ4စက္ကန့် Auto-ခေတ္တနားကိုယ်တိုင်ကနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်သင်လျင်မြန်စွာကို manually (ခေတ္တနား / ကိုယ်ရေးရာဇဝင်) ကို Fingertouch ဝန်ဆောင်မှု toggle ရန်အကြောင်းကြားစာဘားထုံးစံ tile ကို (အန်းဒရွိုက်7+ feature ကို) ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ လက်ဗွေ authentication ကိုမေတ္တာရပ်ခံမီက Pause နှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းပြီးနောက်ပြန်လည်စတင်။
Q: Power + Home key ကို combo သုံးပြီးမျက်နှာပြင်ပုံဖမ်းလို့မရဘူး,
ဖြေ Fingertouch ဝန်ဆောင်မှုတက်ကြွဖြစ်တဲ့အခါ, ကခကျြခငျြးကလုပ်ကွက်အရှင်မျက်နှာပြင်ပုံဖမ်းများအတွက် key combination ကိုလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ၏ထိတွေ့မှုက register လုပ်သွား။ ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းမပြုမီ, ကိုယ်တိုင် Fingertouch ဝန်ဆောင်မှုခေတ္တရပ်တန့်ပြီးကျေးဇူးပြုပြီး, သင်သည်ဤများအတွက်လျင်မြန်စွာ Tile ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်က Samsung ဖုန်းများပေါ်တွင် System Setting ထဲမှာဖွင့်ထားနိုင်သည့် "အုန်းပွတ်ဆွဲ" ဥပမာအားဖြင့်, ပုံရိပ်ဖမ်းယူအခြားနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။
source code: https://sourceforge.net/projects/fingertouchapp/
- လက်ဗွေ authentication ကိုတောငျးဆိုခကျြကိုတွေ့ရှိသောအခါ Auto-ခေတ္တနား function ကိုထည့်သွင်း, Fingertouch ဝန်ဆောင်မှု4စက္ကန့်ကိုယ်နှိုက်ကခေတ္တရပ်တန့်ပြီးပါလိမ့်မယ်
- အကြောင်းကြားစာချန်နယ်များအတွက်ဆက်ပြောသည်ထောက်ခံမှု (က Android 8 အင်္ဂါရပ်)
- ထိတွေ့အပေါ်တုန်ခါရန်ကဆက်ပြောသည် option ကို
- ကယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်မလုပ်မပြုစေခြင်းငှါဒါရှည်လျားထိ function ကိုထည့်သွင်းပေမယ့် Samsung က SDK ကိုအတွက်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်
- bug ကိုပြင်ဆင်ချက်: screen ပေါ်မှာအခါ fingertouch ဝန်ဆောင်မှုအမြဲပြန်လည်စတင်မဟုတ်ပါ
- အန်းဒရွိုက် 8 နှင့်အတူတိုးမြှင့်လိုက်ဖက်တဲ့
1.27 ကို MB